बच्चाहरु रिसाहा किन हुन्छन् ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ महिला/बाल स्वास्थ्य ∕ बच्चाहरु रिसाहा किन हुन्छन् ?
बच्चाहरु रिसाहा किन हुन्छन् ?
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७६ साउन ३१ गते, ०९:२५ मा प्रकाशित
डा. अरुण कुँवर
ठूला व्यक्ति (वयस्क)को आफ्नै पर्सनालिटी भएजस्तै बालवालिकाको पनि आफ्नै किसिमको पर्सनालिटी हुन्छ । जसमध्ये कोही बोलिरहने, कोही नबोल्ने, कोही हाँसी मजाक गर्न रुचाउने हुन्छन भने कोही अरुको तुलनामा बढी रिसाउने पनि हुन्छन् ।
साधारणतयाः कोही बालबालिकाहरु सामान्यवस्था भन्दा बढी रिसाउने, आफ्ना अभिभावकले भनेको नमान्ने, झर्को मान्ने तथा अटेरी हुन सक्छन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको उचित ख्याल गरी उनीहरुमा आएको यस्तो परिवर्तन तथा समस्या कसरी देखा प¥यो भन्ने विषयमा बुझ्नु आवश्यक छ । अन्यथा यस किसिमका बालबालिकाहरुमा मानसिक समस्या समेत देखिन सक्छ ।
बच्चा रिसाहा हुनु या अभिभावकले भनेको कुरा नमान्नु या नसुन्नु पछाडि पनि थुप्रै कारणहरु रहेका हुन्छन्, जसले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असर पार्दछ । फलस्वरुपः उनीहरुको व्यवहार तथा समूहगत समावेशितामा परिवर्तन देखा पर्दछ । जसका कारणहरु निम्न रहेका छन्ः
बच्चाहरुको वातावरणमा केही समस्या या असहज वातावरण सिर्जना भएको खण्डमा
पर्याप्त निन्द्राको अभावमा
साथीसंगी बीचको असहजता या साथीहरुले गिज्याउने तथा हेप्ने गरेमा
वंशाणुगत गुणका कारण
असन्तुलित पारिवारिक वातावरणका कारण
धेरै रिसाहा भएको वातावरणमा हुर्केमा (वरिपरिका व्यक्तिहरु रिसाइरहने वा झर्किरहने भएमा)
मानसिक समस्या भएमा (जस्तो डिप्रेशन)
हामीले बालवालिकाको यस्तो समस्या निराकरणको लागि सर्वप्रथम उनीहरुलाई सहज वातावरणको सिर्जना गराइदिनु पर्छ । पारिवारिक होस् या सामाजिक रुपमा हामीले उनीहरुको चाहना बुझेर सोही अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्छ । हामीले उनीहरुको समस्या सुनुवाईको निमित्त जतिसक्दो त्यति समय उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि, उनीहरुको व्यवहारमा केही परिवर्तन आएको छ भने सहज वातावरणमा उनीहरुलाई त्यस परिवर्तित व्यवहारबारे सोध्नुपर्छ ।
यदि कुनै पनि कुराले उनीहरुलाई तनाव भइरहेको छ भने त्यो पाटोहरुलाई निक्र्यौल गरी तनावरहित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसैगरी, अशान्त पारिवारिक स्थितीका कारण पनि बच्चा अटेरी हुने तथा बढी रिसाहा हुने गर्दछ । तसर्थ, हामीले घरमा शान्त एवं पारस्परिक अवस्था बनाइराख्नुपर्छ ।
र, अन्त्यमा हामी बच्चाहरुलाई ‘प्रि टाइम टेबल’ अर्थात् निश्चित समय तालिका तोकिनु पर्दछ । जहाँ उसको पढाइ र विद्यालय गतिविधिहरुसँगै उनीहरुको निम्ति खेलकूद तथा मनोरञ्जनको निमित्त पनि समय छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण बच्चामा यो काम यो समयमा गर्दा हुन्छ भन्ने ज्ञान भै कुनै पनि काम डर र भयरहित रुपमा गर्ने गर्दछ । जसबाट ऊ तनावरहित भै उसलाई कम रिसाउन मद्धत गर्दछ ।